UMthembu unethemba ngethimba azolihola kubhekwe eRomania - Bayede News
Home » UMthembu unethemba ngethimba azolihola kubhekwe eRomania
UMthembu unethemba ngethimba azolihola kubhekwe eRomania
UMPETHA weTwo Oceans Marathon uBongumusa Mthembu uzohola ithimba labasubathi eliyomela elakuleli eRomania kwi-International Athletics Union (IAU) 50km World Championships ngoMandulo. UMthembu wanqoba iTwo Oceans Ultra-Marathon engama-56 km eKapa ngoMbasa, waphuma endaweni yesibili kwi-Comrades Marathon engama-87 km ngenyanga endlule. Ngonyaka odlule wazitholela indondo yethusi kwi-IAU 100km World Championships eCroatia.
Leli thimba labesilisa elimenyezelwe yi-Athletics South Africa kukhona kulo u-Edward Mothibi ongumpetha weComrades Marathon yalo nyaka ebisuka eThekwini yaphelela eMgungundlovu, uDavid Gatebe osake wanqoba iComrades Marathon neTwo Oceans Ultra-Marathon, uLungile Gongqa owanqoba iTwo Ocean Ultra-Marathon ngowezi-2017, uCharles Tjiane owanqoba iForever Resorts Loskop 50km Ultra Marathon ngowezi-2018 noJoseph Manyedi ongumpetha we-Om Die Dam Ultra-Marathon. EIabesifazane lakhiwe uJenna Challenor osake wanqoba iComrades Marathon, uYolande Maclean osake wanqoba i-Om Die Dam Ultra-Marathon, uSalome Cooper osize elakuleli ekuzuzeni indondo yesiliva kwi-IAU 100km World Championships eCroatia ngonyaka odlule, uNtombesintu Mfunzi ozizuzele indondo yegolide kwi-Two Oceans Marathon, uKathryn van Meter noDeanne Horn owayeyingxenye yeqembu lakuleli elaliye kwi- IAU 100km World Championships eCroatia ngowezi-2018.
Yize elakuleli eminyakeni emibili eyedlule lenze kahle kumqhudelwano wama-100km World Championships njengoba belikwazi ukubuya nezindondo, kodwa kulokhu lizofuna ukuqeda ishobolo lithole indondo yalo yokuqala kumqhudelwano wama-50km World Championships selokhu yagcina ukunqontshwa wuSandile Ngunuza ethola indondo yesiliva e-Ireland ngowezi-2010. UMongameli we-Athletics South Africa uthe leli thimba lihle kakhulu namathemba akhona ukuthi lingabuya nezindondo. Ukwenza kahle kwabo kumqhudelwano wama-100km kuzobagqugquzela ukuba benze kahle.
UManyonga noSemenya bayithemba le-Afrika
UMthembu uthe kuyamjabulisa ukuthola elinye ithuba lokuyomela iNingizimu Afrika, njengoba ekwenzile eminyakeni emibili emela elakuleli kumqhudelwano wama-100km. “Kuhlezi kuyintokozo ukumela izwe lakho futhi ukuya phesheya kwezilwandle kuyakusiza ufunde ngalo mdlalo nangawe siqu sakho. Ngizobe ngigijima okokuqala kwi-World 50km Championships eRomania, kodwa anginaluvalo ngoba ngenze kahle kwi-Two Oceans yama-56km. Nakulo nyaka ngilindele into efanayo. Nginolwazi oluhle lokuya phesheya kwezilwandle njengoba ngenza kahle kwi-World 100km Championships, ngaphuma endaweni yesibili ngiqala ukuya eSpain ngowezi-2016, ngaphuma indawo yesithathu eCroatia ngonyaka odlule. Ithemba likhulu ukuthi sinqobe indondo yegolide eRomania,” kuphetha uMthembu.
Umqhudelwano i-50km World Championships uzoba lu-1 kuMandulo wezi-2019 eBrasov, eRomania.
Bayede News Jul 6, 2019